Airporka Garowe oo Habeen Madoow Dad Caraysan Cagaf Cagaf Geliyay +Cod | Wardoon Wardoon.net - Somali News
Airporka Garowe oo Habeen Madoow Dad Caraysan Cagaf Cagaf Geliyay +Cod
Maamulka gobolka Nugal, ayaa xaqiijiyay in la caalamadsaday qaybo kamid ah Garoonka diyaaradaha magaalada Garowe ee caasimadda Puntland oo hadda dhismihiisu marayo heer dhamaad ah.
Ku-xigeenka guddoomiyaha gobolka Nugal, Qaasim Maxamed Cabdi, ayaa sheegay inay xalay dad ku dhaqan magaalada Garowe Cagaf-cafag galiyeen qaybo kamid ah dhulka loo asteeyay madaarka diyaaradaha Garowe.
Qaasim ayaa sheegay inay hayaan magacyada dadka ku dhaqaaqay tallaabadaas dhawaanna soo taagi doonaan maxkamad, wuxuuna maamulka degmada Garowe iyo laamaha ammaanka faray inay gacanta kusoo dhigaan.
Mar wax laga weydiiyay sida ay ku dhacday in la calaamadeeyo dhul kamid ah Garoonka iyadoo ay joogaan ciidamo islamarkaana kaabiga ku hayo Kantaroolka Bari, ayuu sheegay in lagu beegay xilli dambe oo aysan cidna soo jeedin isagoo xusay in dhulka Garoonku yahay mid aad u ballaaran.
Dhinaca kale, wuxuu sheegay inay ciidamo wardiyeeya u sameeyeen Layrarka cad-ceedda ku shaqeeya ee ku xiran waddooyinka waaweyn ee magaalada Garowe, wuxuuna tilmaamay in arrintaasi gacan weyn ka gaysteen shacabka magaalada Garowe.